रिश्ते मा रोमान्स | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
समयको साथ, रोमान्स सब्सिड गर्न सक्दछ
दुवै साझेदारहरू रोमान्सका लागि मागमा छन्
साना इशाराहरू र प्रस्तुतहरू धेरै गर्न सक्छन्
के रोमान्स फेरि आउन सक्छ?
एक रोमांटिक डिनर
रोमान्स फेरि सुत्न नदिनुहोस्
खास गरी जब एक सम्बन्ध धेरै वर्षसम्म रहन्छ, यो कहिलेकाहीँ हुन सक्छ कि साझेदारीमा रोमान्स एकदम कम हुन्छ। यो सामान्य छ, तर जोडीहरू यसको बारेमा केही गर्न सक्छन्, किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ कि रोमान्टिक सम्बन्ध सम्बन्धमा राखिएको छ। यस परियोजनाको लागि सफलताको लागि, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि दुवै साझेदारहरूले प्रतिबद्धता र अग्रतालाई अग्रतामा रोमांस ल्याउने इच्छा गर्नेछन्।
सम्बन्धमा रोमान्स पुनर्जीवित गर्न
सबै पछि, एक सम्बन्धमा सधैं दुई मान्छे समावेश छ। अब, निस्सन्देह, प्रश्न कसरी उत्पन्न हुन्छ रोमान्स कसरी रोजगारीको जीवनको अंश बन्न सक्छ। त्यहाँ एक तरिकामा रोमान्टिक जीवन एक सम्बन्धमा धेरै तरिकाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।
युवा युगलसँग रोमान्टिक डिनर छ
अक्सर, साझेदारीमा रोमांस समावेश गर्न धेरै आवश्यक छैन, किनकि साना इशाराहरू पनि यो मद्दत गर्छन्।
एक निश्चित रोमांस सधैं उपस्थित हुनु पर्छ, किनकि एक जोडीले रोमान्टिक वातावरणबाट लाभ उठाउन सक्छ। यस कारणको लागि, यसले रोमान्स सम्बन्धमा फर्किनेछ र यो साझेदारहरू सँगै सँगै लैजानु पक्का सुनिश्चित गर्न सक्दछ। एकसाथ एक रातको खानेकुरा वा साझेदारको लागि सानो उपहार दिने रोमान्स जीवित राख्न मद्दत गर्दछ।
पनि एक साझा अवकाश गतिविधि यो सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि निकटता साझेदारलाई सकारात्मक रूपमा मानिन्छ। कहिलेकाहीँ यो लामो समयमै रोमान्टिक इशाराहरू प्रदर्शन गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर यो प्रयास अक्सर सार्थक हुन्छ, किनकि रोमान्स भन्दा पूर्ण सम्बन्धले दुवै साझेदारहरूको लागि एक सुन्दर जीवन प्रदान गर्न सक्छ। तर किन रोमांटिक माहौलले वास्तवमा केहि अवस्थाहरूमा कम गर्छ?
जबसम्म उचित काउन्टरमेसनहरू लिइएन भने, यो एकदम सम्भव छ कि रिश्तेमा रोमान्टिक मूड समय संग बन्द हुन्छ। धेरै सम्बन्धको सुरुवातमा, साझेदारको रुचि अत्यन्तै ठूलो छ, र तदनुसार, साझेदारलाई सन्तुष्ट पार्न र उहाँलाई आनन्दित बनाउन धेरै प्रयासहरू गरिन्छ।
तर सम्बन्धमा केही बिंदुमा दैनिक जीवनको सुरुवात गर्दा समय आउँदछ। साझेदारको प्रेम कहिलेकाहीं दिइएको छ, र पहिले सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु प्रयासहरू अन्ततः केहि कम भयो। रोमान्टिक इशाराहरू बिना, यो केवल प्राकृतिक छ कि रोजगारीको जीवन बढ्दो माथिल्लो हात बढ्दै गएको छ र सम्बन्धमा रोमान्स छोटो छ।
अझै पनि एकदम ताजा साझेदारीमा, यो हुन सक्छ कि रोमान्स छिट्टै घट्छ।
निस्सन्देह, यो रोक्नको लागि उत्तम ज्ञान दिन्छ। रोमान्स हराउनदेखि सम्बन्धलाई रोक्न थुप्रै तरिकाहरू छन्। रोमान्स सधै रिश्तेमा वर्तमान विषय रहनु पर्छ। तथापि, साझेदारहरूको मात्र होइन, रोमान्टिक इशाराहरू प्रदान गर्न सक्दछ। बरु, यो रोमांसको हेरचाह गर्न दुई साझेदारहरूको चासोमा हुनुपर्दछ।
साझेदारीमा रोमान्स आफैले आउँदैन। जब दुवै रोमान्टिक भावनाहरु को बनाए राखन को लागी दुवै साझेदार एक सम्बन्ध मा रहछन। जब दुवै पार्टनरले अन्य पार्टनरलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्छन्, यो रोमान्टिक दिन-दिनको जीवन सिर्जना गर्न सजिलो छ जुन सम्बन्धमा सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्छ।
दुवै साझेदारहरूको प्रयोग गरेर, रोमान्स धेरै फरक हुन सक्छ, किनकी, हरेक व्यक्तिसँग रोमान्टिक इशाराको फरक विचार छ। सबैले अरू चीजहरू रोमान्टिक भन्दा बढी महसुस गर्छन र यही कारणले जो जोडीहरूले राम्रो साथी चाहानुहुन्छ भनेर सोच्नु पर्छ। एक सम्बन्ध जुन केहि समयको लागि जाँदै छ, साझेदारले सामान्यतया एकअर्कालाई धेरै राम्ररी थाहा पाउँदछ र कुन चीजहरू मनपर्छ भनेर जान्दछ।
यसले यो साथीलाई अपील गर्न केहि तयार गर्न सजिलो बनाउँछ र यस प्रयासलाई रोमाञ्चक इशाराको रूपमा बुझाइने संभावनाहरू बढाउँछ। यदि दुबै साझेदारहरूले सम्बन्धको लागि काम गर्छन् र रोमान्स को संरक्षण या पुनर्जीवित गर्न को लागी उनको उपयोग करते हो, लक्ष्य को प्राप्त गर्न को संभावना अधिक भन्दा अधिक छ यदि केवल एक पार्टनर ले लक्ष्य को पछि लागे हो। पहिले नै सानो इशाराहरूसँग एक प्रतिभाशाली सुरुवात गर्न सकिन्छ।
एक सानो इशारा पनि रिश्ते मा रोमांटिक मूड प्रदान गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि, यसले काम पछि फूलको गुच्छा किन्न र तपाईंको साझेदारलाई ल्याउन धेरै प्रयास गर्दैन। धेरै मानिसहरू खुसी हुन्छन् जब तिनीहरूले फूलको रूपमा उपहार पाउँछन्।
अन्य अप्रत्याशित प्रस्तुतिहरूले पनि साथीलाई पनि कृपा गर्न सक्छन्। सबै पछि, रिश्तेमा वरदान उपहार दिन क्रिसमस, वेलेंटाइन दिवस वा जन्मदिन जस्ता दिन मात्र सम्भव छैन। एक उपहार, जुन अप्रत्याशित रूपमा गरिन्छ, प्राय: अझ पनि आनन्द प्रदान गर्दछ, उपहारहरू, जुन एक सार्वजनिक बिदाहरूमा हाँस र लगभग एक निश्चित रूपमा साझेदारको रूपमा आशा गर्दछ।
त्यसकारण, यस्ता उपहारहरूले साथीलाई आनन्दित बनाउन सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण छैन कि वर्तमान कति ठूलो वा महंगी छ। यो इशारा गणना गर्दछ, किनकि यसले यो स्पष्ट गर्दछ कि साझेदारको लागि अझै पनि बलियो भावनाहरू छन्। तथापि, यस प्रकारको आश्चर्यजनक उपहार हरेक दिन बनाइनु हुँदैन, अन्यथा तिनीहरू चाँडै पाठ्यक्रमको कुरा बन्नेछन्। सानो प्रस्तुतिले तिनीहरूको विशेषता राख्नुपर्छ ताकि तिनीहरू सम्बन्धमा रोमान्स कायम राख्न योगदान दिन सक्दछन्।
रोमान्टिक शब्दहरू समेत, एक रोमांटिक पत्रमा स्पष्ट वा सारांश गरिएको, साझेदार देखाउने राम्रो तरिका हो, जुन भावनाहरू महसुस हुन्छन्। साना इशाराहरू र उपहारहरूले रोमान्स जीवित राख्न वा पुनर्जीवन गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। तर रोमांस किन साझेदारीमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ?
सम्बन्धमा रोमान्स महत्त्वपूर्ण छ
रोमान्टिक इशाराहरू वा रोमान्टिक व्यवहारले एक व्यक्ति जसले आफ्ना साथीको बारेमा ख्याल राख्छ। प्रायजसो, मानिसहरू पहिले नै के छन् भनेर कदर गर्न बिर्सन्छन्। एक राम्रो सम्बन्ध सधैं सचेत रहनु पर्छ ताकि साझेदारीमा रोमान्स गुमाउनु हुँदैन।
एक रोमांटिक सम्बन्ध दुवै साझेदारहरूलाई धेरै मजा र एक महान समय दिन सक्छ
त्यसैले यो एक राम्रो कुरा हो यदि साझेदारहरू साझेदारीमा रोमांटिक मूड बनाए राख्ने प्रयास गर्छन्। रोमान्स आफै स्पष्ट छैन। यो रचनात्मकता र सजिलै समावेश गर्दछ, किनकी, रोमान्टिक इशाराहरू पनि एक फरक फरक हुनुपर्छ, ताकि तिनीहरू बेहोश हुनदेखि रोक्न। यदि रोमान्स, साझेदारहरूको प्रयासको बावजूद, तर केहि समयदेखि सम्बन्धबाट गुमाउनुपर्दछ, त्यसैले यो फिर्ती आवश्यक छ भन्ने कुरा आवश्यक छ।
रोमान्टिक मूड एक साझेदारीमा हराएको भए पनि, यसको अर्थ छैन कि यो पूर्ण र सदाको लागि हराएको छ। बरु, त्यहाँको सम्बन्धमा रोमान्स फर्काउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न त्यहाँ छ र सम्भवतः यो भन्दा सानो बलियो थियो।
रोमान्टिक क्षणमा घर
केही अवस्थाहरूमा रोमान्स पुनरुत्थान गर्न केहि र अझ गाह्रो हुन सक्छ, तर प्रायः सबै अवस्थामा यो प्रयासको लायक छ, किनकि साझेदारीको साथमा रोमान्स भरिएको साझेदारी दुवै साझेदारहरूको लागि एकदम राम्रो कुरा हो। तर वास्तवमा अझ रोमांटिक हो? महिला वा पुरुष?
के महिला र पुरुषहरू समान रूपमा रोमान्टिक छन्?
यो साँच्चै असम्भव छ कि महिलाहरु र पुरुषहरु रोमान्टिक हो कि भन्ने कुरा असम्भव छ, किनकि प्रत्येक व्यक्तिले रोमान्स शब्दद्वारा केहि कुरा बुझ्दछन्। महिला र पुरुष दुवै रोमान्सको भावना हुन सक्छ। एक सम्बन्धले फाइदा लिन सक्छ यदि दुबै साझेदारहरूले साझेदारीमा सानो रोमान्स प्रदान गर्छन् र यसैले एक आनन्दित सहकार्यलाई बढावा दिन्छ। त्यसैले महिला र पुरुषहरू समान रूपमा रोमान्टिक हुनसक्छन्। तर कतिपय एक रोमांटिक साँझ खर्च गर्न र कुन ठाउँ उपयुक्त छ भनेर सम्भव छ?
एक साधारण उद्यम, जुन धेरै रोमांटिक बनाइन्छ, एक रेस्टुरेन्ट मा एक रात को खाना हो। एक रेस्टुरेन्टमा खाएर, दम्पतीले आफ्नै रात्रि तयार गर्न को लागी छैन, र यसको सट्टा कुराकानीमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछ।
ठीक रेस्टुरेन्ट मा एक रातो खाना एक हप्ताको अवकाश समय को रोमान्टिक व्यवस्था को रूप मा मानिन्छ। एक सुखद साँझमा, दम्पतीले आफ्नो रोमान्टिक भावनाहरूलाई बलियो बनाउन एक-अर्कालाई फेरि पुग्ने मौका पाएको छ। रेस्टुरेन्टमा एकसाथ खाना खाने मात्र न केवल रिश्तेमा रोमान्स बढ्न सक्छ। यस लक्ष्य को प्राप्त गर्न को लागि आश्चर्य राम्रो तरिकाले उपयुक्त छ।
रोमान्टिक आश्चर्यको लागी कुनै को कल्पना गर्न को लागी छ?
एक रोमान्टिक आश्चर्य धेरै फरक लाग्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यो लागि रोमांटिक साँझ योजना बनाउन सम्भव छ र त्यसपछि यस तरिका साझेदार आनन्द दिनको लागि कार्यमा राख्नुहोस्। तपाईंको घरमा पनि एक साँझ रोमान्टिक मूड सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आफ्नो घरमा रोमान्सको आनन्द लिनुहोस्
सानो संगीत, एक आरामदायक सोफा, रोमान्टिक चलचित्र र रोमान्टिक मोमबत्ती रोशनी। यहां सम्म कि यी सानो चीजहरु को मदद संग, एक रोमांटिक शाम को खर्च गर्ने अवसर छ, जो एक जोडा पूरी गर्न को आनंद ले सकते हो। साँझको लागि तयार हुने बित्तिकै यो पनि आफ्नो घर छोड्न आवश्यक छैन।
आफ्नो साझेदारसँग रोमान्टिक क्षण अनुभव गर्नुहोस्
सोफेमा एक आरामदायक शाम धेरै रोमांटिक हुन सक्छ। निस्सन्देह, त्यहाँ अन्य तरिकाहरू छन् जुन साझेदारीमा रोमान्स कायम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। जो जोडीहरू उनीहरूको नि: शुल्क समय खर्च गर्न मनपर्ने रूपमा मौका गुमाउन सक्छन् र शौकको खोजी गर्न सक्छन्, जो दुवै साझेदारहरू सँगसँगै अभ्यास गर्न सक्छन्।
साझेदारसँग सम्झौता गर्न
निस्सन्देह, यो सम्बन्धमा सधैँ रोजगारीको जीवन संग रोमान्स सङ्कलन गर्ने सल्लाहकार छ। उदाहरणका लागि, साझेदारहरूले एक-अर्कासँग संलग्न हुन सक्दछन् कि तिनीहरू साझेदारको शौकहरूमा रुचि राख्छन्। रूचि साझेदारी गरेर, जोडीहरूसँग तिनीहरूको नि: शुल्क समय खर्च गर्न मौका छ।
यसको अतिरिक्त, यो एक साझा शौक खोज्न सम्भव छ जसमा दुवै पार्टनरहरूले उनीहरूको आनन्द पाएका छन्, किनकि सबै पछि पनि त्यस्ता समयहरू छन् जसमा रोमान्टिक मानिन्छ। उदाहरणका लागि, युगलहरूले नृत्य कोर्स लिन सक्छन् र नृत्य कौशलहरू सुधार गर्न सक्छन्, त्यसपछि कुशलतापूर्वक नृत्यको नृत्यमा नयाँ सिक्न नृत्यहरू राख्न सक्छन्।
साझेदारी गरिएको शौकले सम्बन्धमा रोमान्स बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। यस तरिकामा, यो साझेदार देखाउन पनि सम्भव छ कि उहाँमा उत्कृष्ट चासो छ। एक पटक यो रोमानिस फिर्ता रिश्तेमा व्यवस्थित गर्न एकपटक, दुवै साझेदारहरूले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तिनीहरू फेरि सुत्न सक्दैनन्।
कुनै पनि दम्पती जसले आफ्नो सम्बन्धमा रोमान्सको कमजोरी अनुभव गरेको छ भनेर थाह छ कि साझेदारीमा रोमान्स फिर्ता लिन धेरै गाह्रो हुन सक्छ। यस कारणको लागि, यो सुनिश्चित गर्न को लागी छ कि रोमांटिक मूड फेरि सुत्नु हुँदैन। रोमान्टिकवाद सबै सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसैले उनी कुनै साझेदारीमा हराइरहेको छैन।
समेत रोमान्टिक इशाराहरू सम्बन्धमा रोमान्समा योगदान गर्न सक्छन् बेवास्ता गरिएको छैन। केही राम्रो प्रशंसाहरू वा प्राणी शब्दहरू गाह्रो हुने छैन र साझेदारले यसको सट्टामा प्रशंसा गर्नेछ। रोमान्टिक रेस्टुरेन्ट एउटा संयुक्त यात्रा वा घर मा एक आरामदायक साँझ आफ्नो पार्टनरसँग केही समय खर्च गर्न र पाठ्यक्रम, विस्तृत कुराकानी एक सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छन् किनभने, वार्ता पकड राम्रो तरिका हो। यो सम्भव छ सम्भव छ कि एक साझेदारीमा सुत्नदेखि रोमांस रोक्न केहि प्रयास।
कथा पाठ ब्रदर्स ग्रिम - द पेस इन बुट्स